ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: တစ်နာရီ နှစ်ထောင်
အဖေလုပ်သူဟာ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်လာပြီဆို အမြဲ နောက်ကျပြီး၊ ပင်ပန်းနွမ်းချိနေတော့ သားတစ်ယောက်ရဲ့ တည်ရှိမှုကိုတောင် ဂရုမစိုက်နိုင်အားတော့ဘူး။ တစ်နေ့ သူ့ရဲ့ ငါးနှစ်အရွယ် ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့သားက ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်ပြီး အဖေကိုတွေ့ဖို့ စောင့်နေလေရဲ့။ သူ့အဖေကို မြင်တယ်ဆိုရင်ပဲ
သား ။ ။ ဖေဖေ၊ မေးခွန်းတစ်ခုလောက် မေးလို့ ရမလား။
ဖေ ။ ။ ပြောပါသားရယ်၊ မေးလို့ရတာပေါ့။
သား ။ ။ ဖေဖေ အခုလို အလုပ်လုပ်တာ တစ်နာရီကို ဘယ်လောက်ရလဲဟင်။
ဖေ ။ ။ ကလေးက ကလေးနေရာ မနေဘူး။ ဒါ မင်းနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။ ဘာလို့ ဒီမေးခွန်း မေးရတာလဲ။
သား ။ ။ သား သိချင်လို့ပါ။ ပြောပြပါနော် ဖေဖေ။ တစ်နာရီ ဘယ်လောက်ရလဲ။
ဖေ ။ ။ အလုပ်က ပင်ပန်းရတဲ့အထဲကွာ။ မင်း သိချင်သပါ့ဆို ပြောပြမယ်။ တစ်နာရီ နှစ်ထောင်ရတယ်။
"အိုး" လို့ နှုတ်က ရေရွတ်လိုက်ပြီး ကလေးခမျာ ခေါင်းလေး ငိုက်စိုက် ကျသွားတယ်။ ခဏကြာတော့ ခေါင်းလေး မော့လာပြီး သူ့အဖေကို
"သားကို ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်လောက် ချေးပါလား"
"ဒီ ပိုက်ဆံတစ်ထောင် ချေးပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ အရုပ်တွေ လျှောက်ဝယ်မလို့ မလား။ သွား ... မင်းအိပ်ခန်းကို အခုသွား။ အိပ်တော့။ မင်း ဘာလို့ အဲလောက် အတ္တဆန်ရသလဲ ဆိုတာ သေချာပြန်စဉ်းစားစမ်း။ ငါ့မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒီလို ကလေးကလား အပြုအမူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်နေရသလိုပဲ။"
ကလေးခမျာ ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ဘဲ တိတ်တိတ်ကလေး အခန်း ပြန်သွားတော့တယ်။
အဖေလုပ်သူက ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး တွေးလေ ဒေါသထွက်လေ ဖြစ်နေတော့တယ်။ ပိုက်ဆံလေးချေးဖို့ ကိစ္စများ ငါ့ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘယ်လောက်ရသလဲလေး ဘာလေးနဲ့။ မေးရက်လိုက်တာ လို့ တွေးနေမိတယ်။ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ အဖေဖြစ်တဲ့ သူက တည်ငြိမ်စ ပြုလာပြီး ကလေးရဲ့ မေးခွန်းနဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို သေချာ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ သူ ငွေတစ်ထောင် ချေးတာဟာ တကယ်ပဲ တစ်ခုခု ဝယ်ဖို့ လိုအပ်နေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီကလေး အဲဒီလို အရင်က ချေးလေ့မရှိပါဘူးလို့ တွေးလိုက်မိတော့ ကောင်လေးရဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်သွားပြီး ကောင်လေးနဲ့ စကားသွားပြောတယ်။
"သား မအိပ်သေးပါဘူး ဖေဖေ"
"ဖေဖေ ပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်သား။ အဖေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ လောသွားတယ်။ တနေကုန်လုံး ပင်ပန်းထားတော့ သားအပေါ် ဒေါသတွေ စုပုံ ချမိသွားတယ်။ ရော့သား၊ သားလိုချင်တဲ့ ငွေတစ်ထောင်။"
ကလေးက မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ "ကျေးဇူးပါ ဖေဖေရယ်"
ကလေးက သူ့ ခေါင်းအုံးအောက်မှာ သိမ်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံ အနွမ်းလေးတွေကို ထုတ်ရေလိုက်တယ်။ အဖေလုပ်သူက ဒီကောင် သူ့မှာလည်း ပိုက်ဆံ ရှိလျက်နဲ့ ငါ့ဆီက ထပ်တောင်းသေးတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဒေါသက တစ်ချောင်းချောင်း ထပ်ထွက်နေပြီ။ ကလေးက သူ့ ပိုက်ဆံတွေကို အသေအချာ ရေကြည့်ပြီး သူ့အဖေကို မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ အဖေလုပ်သူကလည်း ဒေါသတကြီးနဲ့
"မင်းဆီမှာ ပိုက်ဆံတွေ ရှိနေရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ထပ်တောင်းရတာတုန်း" လို့ အော်ဟောက်လိုက်တယ်။
သားလုပ်သူ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်တာက
"အဲဒီတုန်းက မပြည့်သေးလို့ပါ ဖေဖေ။ အခုတော့ ပြည့်သွားပြီ။"
"ဖေဖေ၊ သားမှာ အခု ငွေနှစ်ထောင် ရှိသွားပြီ။ ဖေဖေဆီက အချိန် တစ်နာရီစာ သားကို ရောင်းပေးပါလားဟင်။ မနက်ဖြန် ညနေ အိမ်ကို စောစော ပြန်ခဲ့လေ။ သားတို့ ညစာ အတူတူစားရအောင်လား။"
xxxxx ဝဝဝဝဝဝ xxxxx
ပုံပြင်ကတော့ ဒါလေးပါပဲ။ ကြားဖူးတဲ့သူလည်း ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တောင် ဖတ်ဖူးတာ အတော်လေး ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အထပ်ထပ် အခါခါ ပြန်ဖတ်လည်း မရိုးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိပေးချင်လို့ပါ။ အဲလောက်ကြီး မအားတာ မဟုတ်ပေမယ့်လို့။ ပုံပြင်ရဲ့ အနှစ်သာရက အလုပ် သိပ်ကြိုးစားတယ် သိပ်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ လူတွေကို သတိပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒပါ။ သူတို့အနေနဲ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်သင့်တာက ငါတို့ ဘာကြောင့် အလုပ်လုပ်နေသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ Rich Dad, Poor Dad စာအုပ်ထဲမှာ Poor Dad က ပိုက်ဆံရဖို့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့။ Rich Dad ကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း ပိုက်ဆံရှာတယ်တဲ့လေ။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဆင်သလိုလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် မတူဘူးဗျ။ တစ်ယောက်က ပိုက်ဆံရဖို့ အလုပ်လုပ်တော့ အလုပ်လုပ်ရင်း ပိုက်ဆံရဲ့ ကျေးကျွန် ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုက်ဆံရတဲ့ အလုပ် မှန်သမျှ လုပ်မယ်။ သူ့ ပန်းတိုင်က ပိုက်ဆံရဖို့။ ဒီတော့ တခြားဟာတွေကို စတေးဖို့ ဝန်မလေးတော့ဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး မိသားစုအတွက် ရှာတယ်ဆိုတာတောင် မိသားစုရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ချစတေးလာတတ်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်က အလုပ်လုပ်ရင်း ပိုက်ဆံရှာတယ်။ သူ့ရဲ့ ဦးတည်ချက်က အလုပ်လုပ်ဖို့။ ဒီတော့ အလုပ်ရွေးလာတတ်တယ်။ အလုပ်ရွေးတယ်ဆိုကတည်းက သူ့မှာ အကန့်အသတ်တွေ များလာတယ်။ သဘောက ညပိုင်းမလုပ်ဘူး၊ စာဖတ်ဖို့။ စနေတနင်္ဂနွေ မလုပ်ဘူး၊ အနားယူဖို့ စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလို မကန့်သတ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် မိသားစုအတွက်လို့ ပါးစပ်က တဖွဖွ ပြောရင်းနဲ့ မိသားစုကို လစ်လျူရှုနေမိတတ်တယ်။
ကုမ္ပဏီအတွက်၊ ရာထူးအတွက်၊ ဘဝရှေ့ရေးအတွက်၊ လစာအတွက်၊ မိသားစု တင့်တောင်းတင့်တယ် နေနိုင်ရေးအတွက် ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် စပယ်ရှယ် အလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေကို တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မနက်ဖြန် သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီက အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကျနော်တို့ နေရာကို နောက်တစ်ယောက် လူစားထိုးပစ်လိုက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ လစ်လပ်နေတဲ့ ဒီနေရာကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားပြီးတော့ တစ်သက်လုံး ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ခံစားသွားကြမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။ ချစ်တဲ့သူတွေကို ပစ်ပယ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာဟာ တကယ်ကို ထိုက်တန်တဲ့ (သို့) အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဟုတ်ပါ့မလား။
FAMILY ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အရှည်ကို သိကြရဲ့လား။
After about an hour or so, the man had calmed down, and started to think: Maybe there was something he really needed to buy with that $10 and he really didn’t ask for money very often.
But the family & friends we leave behind will feel the loss for the rest of their lives. And come to think of it, we pour ourselves more into work than to our family. An unwise investment indeed!
Sunday, December 21, 2008 | စာညှနျး ဘာသာပြန်, တွေးစရာ
ဤပို့စ်အား Sunday, December 21, 2008 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး ဘာသာပြန် , တွေးစရာ နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။